James Rodriguez oo la gudoonsiiyay kabtii dahabka ee Koobka Aduunka+ SAWIRO | Wardoon Wardoon.net - Somali News
James Rodriguez oo la gudoonsiiyay kabtii dahabka ee Koobka Aduunka+ SAWIRO
Weerar yahanka xulka qaranka Colombia iyo Kooxda Real Madrid James Rodriguez ayaa gacanta laga saaray kabtii dahabka ahayd ee uu ku guulaystay tartankii koobka aduunka.
Xaflad khaas ah oo loo qabtay abaal marinta kabta dahabka ah ee uu xidigani ku guulaystay oo ka dhacday magaalada Madrid ee dalka Spain ayaa lagu gudoonsiiyay kabtii dahabka ahayd ee uu xaqa ugu yeeshay gool dhalinta koobka aduunka.
James ayaa lix gool ka dhaliyay shan kulan oo uu ciyaaray koobka aduunka isagoo kabta dahabka ah ka hor qaaday laacibiin waa wayn oo kubbada cagta magac iyo maamuus wayn ku leh oo ay ka mid yihiin Thomas Muller (5),Neymar, Messi, Robin Van Persie oo dhamaantood iyaguna lahaa min 4 gool.
23 jirkan ayaa goolal ka dhaliyay wadamada kala ah Greece, Cote d’Ivoire, Japan iyo Brazil, halka uu laba gool ka dhaliyay xulka qaranaka Uruguay, James oo ka hadlay arintan ayaa yidhi: “Anigu aad ayaan ugu han waynahay, sababtoo ah waxay ahayd riyadayda waxaanan rajaynayaa in aan marar kale oo badan ku guulaysto, Waxaan filaya inaan haysto kooxdii ku haboonayd ee aan taa ku samayn lahaa”.
“Qofkasta oo kooxda ka tirsani waa mid fiican, waa group adag waxaananu rajaynaynaa inaanu koobab badan ku guulaysano, taas oo ah waxa kooxdu doonayso, waan farax sanahay.
Sidoo kale James ayaa ku guulaystay goolkii ugu quruxda badnaa ee laga dhaliyo tartanka koobka aduunka kaas uu ka dhaliyay Uruguay.